Oovimba beSilivere (XAG) - Funda ukuRhweba
tag: Isilivere (XAG)
Isilivere (XAG) Imihla ngemihla Vala Ngaphezulu kwe-$24 Handle iPave indlela
ISilivere (XAG) Uhlalutyo lweXabiso – ngoNovemba 7
Ixabiso lendawo yeSilivere (i-XAG) linyuke kakhulu kurhwebo lwakutsha nje lophule i-24.00 yokubamba okwangoku. Abathengi bentsimbi exabisekileyo bajonge ukoyisa imiqobo eyongezelelekileyo kwaye bavule indlela yokunyuka ukuya kwinqanaba le-24.50 yeedola. Ukwehla okuqhubekayo kwihlabathi kunye Izivuno zaseMelika iyakufuneka kwintshukumo enjalo ephezulu.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 25.50, $ 25.00, $ 24.50
Amanqanaba enkxaso: $ 23.50, $ 23.00, $ 22.10
Isilivere (i-XAG) ibonise ukuphumelela okulungileyo ngaphaya kwe-$ 24.00 inqanaba lokuchasana kwitshati yemihla ngemihla ukusuka kumbono wobugcisa. Ukuchasana okukufutshane kunokwenzeka ukuba kube kwi-$ 24.50, ngelixa inqanaba lokuqala kunye nelesibini lilindeleke ukuba libe yi-$ 23.50 kunye ne-$ 23.02 ngokulandelanayo.
Ukusukela ekupheleni kuka-Okthobha, isilivere ibinyuka ngendlela eyonyukayo xa ithelekiswa nedola yaseMelika. Okwangoku, kuyo yonke iseshoni elandelayo, izinga linokufumana inkxaso evela kwinkxaso ekhulayo ye-trendline malunga ne-$ 23.50 uluhlu. Ngenxa yoko, ixabiso lesilivere lingaqhubeka nokunyuka kwiseshoni yangoku kunye nelandelayo.
Kwixesha leeyure ze-4, iinkunzi zeenkomo ngoku zixhasa isalathiso samandla esizalanayo esinethemba lokubetha i-24.50 yeedola kumzamo wesibini wokudlulela phezulu. Nangona kunjalo, inzuzo yexesha elizayo yorhwebo inokuthintelwa yimiqobo ejikeleze i-24.82 yeedola kunye ne-25.00 yeedola.
Ngexesha lokuhla kwesinyithi, inqanaba le-$ 23.50 liyinkxaso ebalulekileyo yokuqwalasela phambi kwenqanaba lenkxaso yengqondo ethe tye kufuphi ne-$ 23.00. Ukuba ixabiso liwela ngaphantsi kwe-$ 23.00, inqanaba lenkxaso ye-$ 22.10 lingangena ekugxininiseni, njengoko ukuphulwa okungalunganga kwinqanaba kunokukhuthaza iibhere.
tags Isilivere (XAG), Uhlalutyo Technical
Isilivere (i-XAG) yokuCima ukuFumana ukuHamba okuPhezulu ukuya kwiDola lama-23.50
Uhlalutyo lwamaxabiso eXAGUSD-Okthobha 18
Isilivere (XAG) ithamsanqa elilungileyo liphele lijikeleze uphawu lwama- $ 23.50, ngexabiso lisusa eyona bounce yayo imnandi ngaphezu komndilili oshukumayo we-13. Ngexesha leseshoni yangoMvulo, yorhwebo yenyuka kancinci kwaye yagqitywa ukubonwa ihleli kufutshane nokuphakama kwemini kwi $ 23.22- $ 23.40 uluhlu.
Amanqanaba enkxaso: $ 22.87, $ 22.10, $ 21. 42
Namhlanje, isinyithi esimhlophe sinobunzima kwaye asikwazi ukwahlula ngaphezulu kuluhlu oluphezulu lokunyuka malunga ne-23.50 yeedola, kungoku nje ithengisa ebomvu kwi $ 23.22 ngeyunce. Ngaphaya kwamanqaku angama- $ 23.50, iinkunzi zeenkomo zinokuphinda zibenamandla okuqonda.
Isibini seXAGUSD sibanjwe yindlela yokuhla kwakhona kwaye imeko inokuhlala ikwimo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo. Ukuvalwa ngaphezulu kwoluhlu oluphezulu lwanamhlanje, okwangoku kungama- $ 23.45, kungabonisa isaphulelo esisezantsi ukusuka kwinqanaba lama- $ 21.42 lokuqhubekeka kwereyali eyaqala ngasekupheleni kukaSeptemba, kuvulelwa indlela yekhefu ngaphaya komqobo we- $ 23.50.
Isilivere (i-XAG) inoluhlu olukhulu kwixesha leyure ezi-4 ukusuka ngasekupheleni kukaSeptemba kwinqanaba le- $ 21.42, iphakamisa ukubakho okungaphezulu. Ngenxa yoko, isinyithi siyaqhubeka nokunyuka. Sele igqobhoza kwinqanaba eliphambili le- $ 23.00, ebonisa ukuba inqanaba elilandelayo elilandelayo liyaqhubeka.
Esi sibini kulindeleke ukuba sifumane inkxaso kwi- $ 22.87, kwaye ikhefu lelo nqanaba lingayithatha kwinqanaba elilandelayo lenkxaso ye- $ 22.10. Esi sibini kulindeleke ukuba sibethe ukungavisisani okokuqala malunga ne- $ 23.50, ngekhefu ukuyithatha kwinqanaba elilandelayo lokumelana ne- $ 24.00.